I-Apple Maps sele inolwazi lwezothutho loluntu kwizixeko ezikhulu eIreland | Ndisuka mac
I-Apple Maps sele inolwazi lwezothutho loluntu kwizixeko eziphambili zaseIreland
I-Apple yenza inkqubela ethe chu ekwandiseni ulwazi lwezithuthi kunye nokuhamba koluntu kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi. Ewe kunjalo, siza kuyibona le ngcaciso kwisicelo seMaphu zeMacOS. Kubaluleke kakhulu ukukuxwayisa ngesiganeko sezithuthi, xa kufuneka ufike kumcimbi, okanye uxhomekeke kwizithuthi zikawonkewonke ukuhamba. Ukuba izithuthi zikawonkewonke zaseSingapore zazifumaneka kubasebenzisi, kule veki siyayazi njengokujikeleza ubuncinci izixeko eziphambili zaseIreland.
Okwangoku ayigubungeli yonke i-Ireland. Sinezixeko kunye neendawo ezikufutshane IDublin, iCork kunye neKilkenny. Inkonzo iyafumaneka kuzo zombini iibhasi noololiwe.
Iivenkile zeApple zisasazeke kwilizwekazi laseYurophu ukuqokelela zonke iintlobo zolwazi ezinxulumene neendawo ezinomdla kunye noololiwe, ibhasi kunye nezikhululo zemetro. Ukugqibela kwabo ukubonwa, bebengenile Fort William eScotland naseBridgend County Borough eWales. I-Apple iyangqamanisa inkonzo yayo kunye neeseva zeenkampani zothutho, ukuze naluphi na utshintsho ngomzuzu wokugqibela ngenxa yesiganeko esingalindelwanga kwaziswe ngokukhawuleza kubasebenzisi bayo.
Ngokwolwazi lwamva nje, iApple ayizimiselanga kwenza ikopi yenkonzo ebonelelwa nguGoogle kwiStrato. Endaweni yoko, ufuna ukwenza into ngandlela thile. Siza kubona kwiinyanga ezizayo ukuba yintoni inkampani esele isilungiselele yona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple Maps sele inolwazi lwezothutho loluntu kwizixeko eziphambili zaseIreland
Yongeza ingxelo ye-haptic kwi-Bar Bar ye-MacBook Pro yakho ngale app
I-Apple isungule iApple Pay eIndiya ngaphambili kunokuba bekulindelwe